INigeria Inombolo Yezinombolo | Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
ENigeria Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » ENigeria Inombolo Yefoni
ENigeria Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zefoni eNigeria lwakho uma ufuna ukuhlinzeka ngomsebenzi wakho webhizinisi eNigeria. Leli thuluzi lokukhangisa leNombolo Yezingcingo laseNigeria iqoqo lamakhasimende afanele e-naseNigeria. Ngosizo lwalolu hlu uzokwazi ukunakekela izinkulungwane zamakhasimende abazoba lula kalula.
Ungasebenzisa le database yezingcingo yaseNigeria njengethuluzi lokwakha amathuba, ukumaketha imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Uhlu lwefoni lwaseNigeria ungalusebenzisa kwezinye izinhloso ze-B2C njengokukhangisa, ucwaningo, ucwaningo nokuningi ngokusebenzisa iziteshi eziningi zokusatshalaliswa.
Thenga AbakwaNigeria Abasebenzisi Befoni Uhlu
Uhlu Lwezingcingo lwabathengi baseNigeria
IDatabase Yeposi Lamakheli noma i-Latestdatabase.com inikeza uhlu olugcwele lwezinombolo zocingo zabathengi baseNigeria ezinamakhono wokuhlunga angenamkhawulo, izisebenzi ezinolwazi kakhulu ukukunikeza umphumela omuhle. Izindleko eyodwa kuzo zonke izinhlobo zokuhola ezihlosiwe hhayi nje kuphela enkulu abahlinzeki bohlu nokwazi izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi ukukwenza waneliseke.
Database Yeposi Lamakheli noma i-Latestdatabase.comis umthombo wohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseNigeria. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile kanye nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi, uhlu lweselula, igama, ikheli, izwe nekhodi ye-zip. Ngakho-ke, ukwenza i-telemarketing yakho, ukumaketha kwe-sms kanye nokushaya okubandayo.
Ukuthenga kwezinombolo zocingo lwabathengi beNigeria kuyindlela esebenzayo kunazo zonke ongayisebenzisa ebhizinisini lakho. Imininingwane eqinisekisiwe kunazo zonke ongasiqinisekisa ukumaketha okusebenzayo nendlela elula yokuncenga ikhasimende lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho ngokuchofoza nje.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi eNigeria luqukethe idatha eyi-80,000 evumelekile yokubuyekezwa kohlu lwabathengi abafinyelela ku- $ 800, isoftware engalandwa ngokushesha engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV lokukhokha ngesikhathi esithile ongalikhokha nge-master Card, paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa , inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo. Ngakho-ke, ukuthola eminye imininingwane nezinye izinsizakalo ungavakashela isayithi le-Feddabase.com ukuthola imininingwane yakho.
ENigeria Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo